Telecom esiteshini ugesi uhlelo - China Renergy Izinsiza kusebenza Co., Ltd
Telecom esiteshini uhlelo ugesi
Micro igridi uhlelo
Off-grid amandla omoya ukunikezela
Off-grid solar wind diesel
Telecom esiteshini ugesi
Ama-solar wind futhi igridi hybrid
Small ophephela abaphehla ugesi kukhona ikhambi ephelele emkhakheni ezokuxhumana.
Telecom iziteshi ajutshelwa ngobuningi emhlabeni wonke ukuqinisekisa ukuxhumana ingqalasizinda eyanele. Ngo iningi endaweni ekude le emajukujukwini, nezidingo amandla lezi iziteshi zivame enikeziwe nge imvelo abanamusa udizili ugesi, engewona nokho ezibizayo kuphela usebenze kodwa nokwanda Ukuqhubeka ombiwa phansi ukuthengisela, ukusetshenziswa udizili ugesi kuyosheshe kube engasimeme.
Renergy ophephela abaphehla ugesi nge ongaphakeme service kanye nokugcinwa nezimfuneko ukwenza ukufakwa e kude futhi kunzima inkonzo izindawo ikhange nakakhulu.
Isicelo: Ukuhlinzeka okuthembekile, engabizi futhi imvelo amandla umthombo China mobile Telecom esiteshini endaweni akude.
Kusukela ngonyaka ka-2008, Renergy uye wahlanganyela umklamo okunokwethenjelwa amandla umthombo iziteshi Telecom endaweni yasemakhaya eChina ephathekayo. Iningi amasayithi amasha noma amasayithi olusha yayakhiwa izintaba namagquma, kwakudingekile ukuba inethiwekhi Yakha kanye nokugcinwa zazingase zithuthwe ziyiswe ngaso sonke isikhathi konyaka ngesikhathi kuncishiswa indawo ukuvakashelwa
Imishini ukhiye kohlelo ugesi iyona Renergy Wind ephendulwa ngamanzi. Lisetshenziswa njengendlela isivikelo esiyinhloko-akude amandla izinhlelo endaweni yasemakhaya. Ngenxa yalokho, le ophephela ikufakazele lingazikhulisa yini ngaphezu kweminyaka eminingana kule ukweqisa nokhahlo kakhulu sezulu ezingaba khona ntshonalanga-ntshonalanga yeChina. endaweni Northwest kuyinto endaweni ezinomoya; iningi MW ovunguzayo amapulazi zitholakala khona. ipheshulwa eqinile kakhulu umoya kungenzeka nganoma isiphi isikhathi sonyaka, ikakhulukazi ebusika, futhi lokhu ukuklebhuka ngenxa engamamitha nokuningi wadalula izindawo ephakeme lapho iziteshi Telecom kwakufanele ukuba yakhiwe. Kwakubalulekile ukuthi noma yiphi impahla efakwe kulezi zindawo Bawulondoloza nokunokwethenjelwa ngenkathi zidinge ukunakekelwa ubuncane.
Uhlelo ibilokhu tekusebenta kusukela 2009 futhi uhlelo amandla ngesikhathi ukufakwa amasayithi azenzile kahle kakhulu. Renergy ezifakiwe amakhulukhulu uhlelo esinjalo China ephathekayo. Futhi emva kwalokho, Renergy waqala ukuhlinzeka uhlelo esinjalo China Union, China Telecom.
Kuze kube manje, Renergy uye walungiselela amakhulu uhlelo esinjalo Telecom amakhasimende e-Russia, Tajikistan nase-Iran.
Umoya ephendulwa kanye solar panel ugesi, ukushaja ku DC48 iqembu ibhethri ngokusebenzisa 48V umoya solar hybrid isilawuli, ugesi ngoba Telecom imithwalo.
Udizili generator ingasetshenziswa njengoba amandla isipele supply. Uhlelo kungaba ngokwezinga ukunikeza AC nge off igridi inverter, futhi atholakale ukuxhuma igridi nge ku Igridi inverter.
RW-5kW iphimbo variable, DC200V
8M, umbhoshongo monopole
solar panel kanye ubakaki
1. Multiple-solar panel uxhumano
2. Multiple umoya ephendulwa uxhumano
3. Udizili generator nokwenza isipele
4. Solar MPPT umsebenzi
5. Umoya ophephela MPPT umsebenzi
6. Amandla elanga isilawuli okukhipha voltage
7. Umoya ukulawula amandla okukhipha voltage
8. ibhethri Digital ukuphathwa amandla uhlelo
9. Intelligent umthwalo ukuphathwa uhlelo
10. Uhlelo iphutha ekuxilongweni kanye uhlelo lokuqapha
uhlelo ukudlulisa 11. Wireless
12. Umoya ukuphathwa ophephela ukugijima.
Telecom esiteshini, isiginali esiteshini, base-GSM esiteshini nokunye.
Isicelo Indaba eyimpumelelo
Telecom esiteshini Indaba eyimpumelelo
isikhathi Iposi: Apr-19-2018